Jilaagii caanka ah ee Sean Connery oo geeriyooday | Wardoon
Home Somali News Jilaagii caanka ah ee Sean Connery oo geeriyooday
Jilaagii caanka ah ee Sean Connery oo geeriyooday
Jilaagi caanka ahaa ee Sir Sean Connery oo loo yaqiinnay James Bond ee geeriyooday da’diisu waxay ahayd 90 jir.
Jilaagan geeriyooday oo ka soo jeeda Scotland wuxuu filimaanta uu ku jili jiray magaca jilliinka ee James Bond, wuxuuna si aad ah uu ugu soo caan baxay filimki sirdoonka ee la magac baxay 007.
Wiil uu dhalay Sir Sean, ayaa sheegay aabbihii sida uu u seexday inuu ka soo kicin uuna ku geeriyooday Bahamas , balse xilliyadi u dambeeyey ay xaaladdiisu wanaagsaneen.
Jilaagan geeriyooday oo in ka badan 50 sano jilidda filimaanta ku soo jiray wuxuu muteystay abaalmarinno caalami ah, isaga oo sanaddi 1988-ddii la guddoonsiiyey abaalmarinta Oscar.
Filimaanta caanka ah ee lagu xusuusanayo Sir Sean’s (James Bond) waxaa ka mid ah The Hunt for Red October, Highlander, Indiana Jones, the Last Crusade iyo The Rock.
Jason Connery wuxuu sheegay “aabbihii xilliga uu geeriyoonayey iney la joogeen xubno qoyskiisa ka tirsan, uuna ku geeriyoday magaalada Nassu oo Bahamas ka tirsan oo uu horay ugu jilay filimka ‘Thunder ball’.”
“Maalin muruga leh ayay u tahay cid kasta oo garaneysay iyo cid kasta oo abbahay jecleyd, dadka dunida ku noolna waxaa ka baxay qof qaali ku ah oo uga tagay hadiyado qaali ah uu jilitaankiisa ku goddoonsiiyey.”
Wuxuuna Sir Sean Connery uu ka tagay xaaskiisa iyo wiilashiisa oo kala ah Jason iyo Stephane.
Daniel Craig oo haatan filimaanta ku matala magaca James Bond, wuxuu sheegay Sir Sean inuu ahaa “mid ka mid ah shaqsiyaadki dhinaca jilitaanka filimaanta ugu mudnaa”.
“Sir Sean Connery waxaa lagu sii xasuusan doonaa magaca James Bond iyo waxbadan uu nooga tagay” ayuu yiri.
“Sir Sean wuxuu jeclaan jiray ciyaarta golf, waxaanna u maleynayaa tababar golf inuu haystay.”
Sir Sean filimki ugu horreeyey uu jilay wuxuu ahaa ‘No Road Blocks’ oo uu jilay 1957-kii, halka filimkiisi ugu dambeeyeyna uu ahaa ‘Sir Billi’ oo uu jilay 2012-kii.
Magaca James filimki ugu horreeyey uu jilay uu caankana ku noqday wuxuu ahaa filimka ‘Dr No’ ee uu soo saaray 1962-kii. Balse filinka taxanaha ah ee 007 ayuu si aad ah ugu soo caan bxay.
Toddobada filin ee uu jilaaga koobaad ka ahaa Sir Sean (James Bond) uu caankana ku noqday waxay kala yihiin:
Sir Sean bishii August ee sanadkan ayuu xusay sanad guurada 90-aad ee dhalashadiisa.
Previous articleDAAWO:-“Waan Taageersanahay In La Xidho Dhalinyarada Tagta Muqdisho”
Next articleCabdi Xaashi oo soosaaray warqad kacaraysiisay Framaajo
DAAWO:-Sheekh Shariif 19ka February wixii dhacay wax la iloobi karo ma...
DAAWO:-Weriye Cabdinur Sheekh Maxamad Isxaaq oo ka tagaya BBC-da